बम भेटिएपछी काठमाडौँ, नैकापमा रहेको बिद्यामन्दिर केन्द्रको मतदान स्थगित !
ARCHIVE, POLITICS » बम भेटिएपछी काठमाडौँ, नैकापमा रहेको बिद्यामन्दिर केन्द्रको मतदान स्थगित !
काठमाडौं- काठमाडौँमै बम आतंकका कारण मतदान नै स्थगित गर्नुपरेको छ । नैकाप विद्यामन्दिर केन्द्र नजिकि बम भेटिएपछी उक्त केन्द्रमा स्थगित भएको छ । विहान ७ बजे नै मतदाता लाइनमा बसेका मतदाताहरु त्राहिमाम भएपछी स्थगित भएको मतदान प्रक्रिया पुन: सुरु भएको छ ।
मतदान सुरु भएको केहि समयमै बम भेटिएको थियो । विस्फोट पछि लाइनमा बसेका मतदाताबीचसमेत केही समय भागदौड मच्चिएको थियो । अहिले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाएर मतदान भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरुले पनि घर फर्किन लागेका मतदाताहरुलाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरिराखेको छन् ।